‘जे-जे पर्ला, त्यही टर्ला’ « Drishti News – Nepalese News Portal
‘जे-जे पर्ला, त्यही टर्ला’
५ भाद्र २०७८, शनिबार 11:26 am
सांगीतिक क्षेत्रमा गायिका मेनुका राईले झण्डै दुई दशक संघर्ष र मिहिनेत गरिसकेकी छन् । मिहिनेत गरेअनुसार नाम र शान पनि पाएका छन् । तर, उनको संघर्षका पाइला रोकिएको छैन । खोटाङको बुइँपादेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौं छिरेकी मेनुका २०५६ सालयता निरन्तर गीतसंगीतमै छिन् । उच्चशिक्षाको निहुँमा काठमाडौं छिरेकी मेनुकामा गायिका बन्ने चाह थियो । मेनुका सम्झन्छन्– ‘गायिका बन्न काठमाडौं जान्छुभन्दा बाबु–आमाले रोक्ने भएपछि पढ्न भनेर आएकी हुँ । मेरो उद्देश्य गायिका बन्नुथियो ।’ २०५६ सालमा रेडियो नेपालमा ‘मौरी घुम्छ फूलको बोटैमा’ बोलको गीत गाएर सांगीतिक करिअर प्रारम्भ गरेकी मेनुकाले संगीतमा भारतको इलाहवादबाट डिप्लोमा गरेका छन् । धेरै गीतमा स्वर दिइसकेकी मेनुकाका तीन एल्बम प्रकाशित छन् । गायिका मेनुकासँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
सुरुबाटै कुरा अगाडि बढौँ होइन त ?
हुन्छ । धेरैजसो मेरो बारेमा तपाईंलाई थाहै छ । तैपनि कुरा गरौँ न ।
खोटाङदेखि काठमाडौं किन आउनुभएको थियो ?
क्याम्प पढ्न भनेर आएकी हुँ । मनमा चाहिँ गायिका बन्छु भन्ने थियो । तर, गीत गाउन काठमाडौं जान्छु भन्दा बाबु–आमाले नपठाउने । त्यही भएर एसएलसी दिएपछि क्याम्पस पढ्छु भनेर आएकी हुँ ।
काठमाडौं आएपछि क्याम्पस पढ्नुभयो त ?
पढेँ नि । मैले रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस (आरआर)मा पढेकी हुँ । संगीतप्रति रुचि भएकाले क्याम्पसमा पनि संगीतलाई ऐच्छिक विषयमा राखेकी थिएँ ।
संगीतिक करिअरचाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो ?
२०५६ सालदेखि नै हो । त्यो बेला दिउँसो १ बजेपछि रेडियो नेपाल छिर्न पाइन्थ्यो । रहरले रेडियो नेपाल गइरहन्थेँ । एकदिन दाइहरुले अचानक बोलाएर रेडियो नेपालमा गीत गाउन लगाउनुभयो । त्यो बेला ‘मौरी घुम्छ फूलको बोटैमा’ गीत गाएकी थिएँ । त्यो नै मेरो पहिलो रेकर्डिङ भएको गीत हो ।
गीतसंगीतमा कसरी रुचि जाग्यो ?
म सानैदेखि गीत गाउन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । गाउँघरमा बाजागाजा र गीत बजेको सुन्दा नशा–नशामा रहर जागेर आउथ्यो । अलि ठूली भएपछि विद्यालयमा हुने हरेक प्रतियोगीता र स्टेज कार्यक्रमहरु गाउन थाले । तर, एसएलसी नसकी काठमाडौं आउन नपाइने भएकाले पर्खिनु परेको हो ।
पहिलो एल्बम कति सालमा ल्याउनुभयो ?
सोलो एल्बमचाहिँ २०६४ सालमा ल्याएँ । त्यसअघि कलेक्शन एल्बमहरुमा गाउँदै आएकी थिएँ । तर, कलेक्शन एल्बम मात्र गाएर नहुने त्यो समयमा । त्यो बेला गायिका भनेर चिनाउनुलाई एल्बम निकाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । मेरो पहिलो एल्बम ‘माया आरिसे’ हो ।
मलाई ‘माया आरिसे’ले पनि चिनायो । जुन गीत दर्शक तथा श्रोताले निकै रुचाए । त्यसपछि ‘पानी मीठो यारी खोलाको’, ‘नौलाई शून्य नब्बे’लगायत गीतले ‘गायिका मेनुका राई’ भनेर चिनायो ।
गीतसंगीत क्षेत्रमा लागेर खुसी हुनुहुन्छ ?
खुसी नै छु । आम्दानी हुनु र नहुनु बेग्लै कुरा । तर, आफूले चाहेको र इच्छाएको क्षेत्रमा रमाउन पाउँदा खुसी लाग्दोरहेछ ।
गायनमा लागेर के पाउनुभयो ?
पाउनुभन्दा रहर र रुचि पूरा गर्न संगीतलाई अँगालेकी हुँ । यो क्षेत्रमा लागेर नाम पाएकी छु । जतिले मेरो गीत तथा सिर्जना सुन्नुभएको छ, उहाँहरुले गायिका मेनुका राई पनि छन् भनेर चिन्नुभएको छ । गीतसंगीतमा नलागेको भए एउटी छोरी अर्थात घृहिणीमा मात्र सिमित हुन्थे होला ।
हिजोआज के गर्दैै हुनुहुन्छ ?
अहिले कोरोना पेन्डामिकको समय छ । कहिलेसम्म रहने हो, थाहा छैन । तैपनि केही सामान्य अवस्था आएपछि गीतहरुको काम गरिरहेको छु । कार्यक्रमहरु हुन सकेका छैनन् । गर्नु पनि हुँदैन । किनकि, कोरोनाको त्रास कायमै छ । फाट्टफुट्ट रेकर्डिङहरुमै व्यस्त छु ।
नीजि जीवनमा कोरोनाले कतिको असर गर्यो ?
कोरोनाको प्रभाव मलाई मात्र होइन, सारा संसारलाई परेको छ । स्वास्थ्यका हिसाबले भन्नु पर्दाचाहिँ असर भएको छैन । अहिलेसम्म म र मेरो फेमिली संक्रमित हुनुपरेको छैन । आर्थिक रुपमा सबैलाई प्रभावित बनाएको छ ।
कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
योजना, गीतसंगीतलाई निरन्तरता दिने हो । केही कार्यक्रमहरुका लागि कुरा भइरहेको छ । तर, कोरोना भाग्ने निश्चित छैन । त्यसैले जे पर्ला, त्यही गरौँला भन्ने मनस्थिति बनाएर बसेकी छु ।